» KASHIFAAD: Yaa xasuuqii dhaqaatiirta ka dambeeyey – Yeese dan ugu jirtaa?
Xasaasi:- Maxamuud Sayid Aadan iyo BBC-da maxaa dhex-maray? Su’aalo kulul iyo jawaabo yaab leh
Jaamac Maxamed Qaalib oo arrimo xasaasi ah caawa kashifay + Sirta Ethopia ee Somalia
DAAWO VIDEO “Jilaaga caanka ah ee Soomaaliyeed oo ka soo yeertay arin la yaab leh iyo cabasho ku saabsan….
DAAWO NAXDIN: Nin Xaaskiisa Waxan la eegi karayn Ku samaynaya, Digniin hadaawan hadii aadan…!!
DAAWO: Hooyo qurbaha ka tagtay oo ku dhaqaqday talabo lagu farxay
KASHIFAAD: Yaa xasuuqii dhaqaatiirta ka dambeeyey – Yeese dan ugu jirtaa?
Dec 20, 2013 - 1 Jawaab	ShareYee dan ugu jirtaa Dilka Waxgaradka iyo Wariyaalka Soomaaliyeed? – Tobonkaan Sano dambe Koofurta Soomaaliya waxaa ku socda Qorshayaal kahor imaanaya Xuquuqda Insaanka, Horumarka Dalka iyo Nabad ka aslaxda Soomaaliya.
Waxaa si isdaba joog ah loo fuliyaa Qaraxyo lala beegsanayo Bulshada Taagta daran oo aan waxba galabsan cidnana Dambi ka galin: Dib u milicsada Qaraxii Isbitaal Madina iyo Isbitaal Banaadir, Qaraxii Hotel Shaamoow iyo Hotel Muna, Qaraxii lagu Xasuuqay Ardaydii Dowlada Turkigu u fidisay Deeqda Waxbarasho. Xasuuqii Ardayda iyo Waalidiintoodii wuxuu kor u dhaafay 140 Ruux, intii Goobta iyo intii Isbitaalka ku dhimatay.
Qodobka Labaad waa Dilka Qorsheysan ee lagu fuliyo Wariyaalka naftooda u huray in ey Ummada Soomaaliyeed usoo tabiyaan Xaalada Dalkoodu ku suganyahay.
Durbadiiba waxaa lala soo boodaa iney Falalkaas waxashtinimada ah (Dilalkaas / Qaraxyadaas) oo Bini’aadniga lidka ku ah ka dambeeyaan SHABAAB! Dowladd baarta ma jirto, Saxaafadd dabagashanah ma jirto. Maalmo kadib Dhacdadii waa la iska ilowbay!
Hadana Dilalka Takhaatiirta!?
Waxa dorraad lagu laayay Duleedka Magaalada Muqdisho Afar Takhaatiir ah oo iskugu jiray Saddex Suuriyaan ah iyo Hal Soomaali ah. Sidoo kale Xasuuqaas waxaa ku Geeriyooday Laba Nin oo ilaaladii Takhaatiirta ka mid ah.
Bartilmaameedka Weerarkan wuxu ahaa Dr. C/raxman Macalim Fiqi oo isagu ka badbaaday gaadmadaan, sababtoo ah Gaarigiisu Daqiiqado ayuu ka dambeeyay Kolonyada Gawaarida ah ee weerarku uu qabsaday. Weerarku wuxu ka dhacay agagaarka Koontaroolkii cusbaa ee Afgooye, halka loo yaqaan Siinka-Dheer, waxayna Takhaatiirtu ku sii jeedeen isbitaalka weyn ee Dr. Fiqi uga furan degaanka Ceelasha Biyaha.
Shan Bilood kahor ayay aheyd markii Weerar gaadmo ah lagu dilay Allahu u naxariistee Dr. Cismaan C/raxman Fiqi oo uu dhalay Takhtarka dorraad la weeraray.
Labada Weerarba way beeniyeen Al-Shabaab oo inta badan lagu tuhmo Dilalka gaadmada ah, khibradda aan u leenahay Al-Shabaabna waxay na tusinaysaa inay ka run sheegayaan beenintooda. Sababtoo ah inta badan Al-Shabaab ma beeniyaan ficiladooda. Waxa kaloo aan Al-Shabaab horay loogu aqoon Weerar noocaan oo kale ah oo ay adeegsadaan Hubka darandooriga u dhaca, waxayna weeraradooda oo dhan ku fulin jireen Miinooyinka Qarxa iyo bistooladaha yar yar. Waxa intaas wehlisa inaysan horay iyo gadaalba u jirin wax dakano ah oo ka dhexeeyay Dr. Fiqi iyo Al-Shabaab wuxuuna Dr. Fiqi ka shaqeynayay isbitaalkiisa xiligii ay Al-Shabaab Maamuli jireen Ceelasha Biyaha iyo kadiba.
Inta aanaan u galin cidda uu Tuhunku ku meeraysanayo, waxan iftiimin lahaa taag-darida iyo wax-qabad la’aanta Dowladda Soomaaliya, oo aan iyadu wali u soo jeesan soona bandhigin qorsha Wadanka looga sifaynayo Kooxaha iyo Hubka sharci darada ah. Waxqabadka iyo Howsha Madaxda dowladuna waxay noqotay Lacag aruursi iyo walwal ay ka walwalsan yihiin halka ay ku noolaan doonaan iyo Dhaqaalaha ay ku noolaan doonaan marka ay xilka ka dagaan.
Dakanada lala daba joogo Dr. Fiqi ayaa ah mid ujeedooyin badan. Sirdoonka Reer Galbeedku waxay u arkaan Dr. Fiqi Nin daaweyn jiray dhaawacyada Al-Shabaab xiligii ay Maamuli jireen degaanka Ceelasha Biyaha, sidoo kale Al-Shabaab oo mararka qaarkood lagu tuhmo dabagalka Dr. Fiqi waxaa sabab u ah tuhunkaas in Dr. C/raxman Fiqi uu la dhashay Madixii ciidamada Nabad Sugidda xiligii Dowladdii Sh. Shariif Eng. Axmed Macalim Fiqi.
Dhanka kale waxa tuhunku uusan ka marneyn Ganacsatada Daawooyinka Muqdisho iyo Takhaatiirta Muqdisho oo u arka Dr. C/raxman Fiqi mid Suuqa Ganacsiga ku cariiriyay. Waxa horay u taagneyd dood iyo dacwooyin u dhexeeyay takhaatiir uu ka mid yahay Dr. Fiqi oo isku qilaafay isbitaalkii Al-Xayaat ee ka furan xaafadda Xamar-Bile.
Sidoo kale, tuhun aan sidaas u sii xoog badneyn wuxu soo gali karaa Dagaalada Beelaha Gobolka Sh. Hoose beryahan dambe ku dhex maray oo u arki kara Dr. Fiqi inuu yahay bartilmaameed fudud maadaama uu isbitaal ku leeyahay degaanka Ceelasha Biyaha uuna si joogto ah u isticmaalo wadada beylahda ah ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Keydmedia Online waxey fursadaan Maqaalkaan siiyay uga faa’ideysaneysaa iney u Tacsiyeeso intii ku Geeriyootay Qaraxyadii iyo Dilalkii loo geestay ayaga oo aan waxba galabsan.
Illahey waxaan uga baryeenaa inuu Janadii ka Waraabiyo, Ehaladii ey ka tageenah Samir iyo Imaan Alle ka siiyo. Aamiin, Aamiin.
Isha: KON (504)
Last reply was 2 months ago	Maxamed	View
Taas ee deeda waxaa iskale dowlada somalia dowlada ayaa wax kaog taasina macnaheedo waxaaweye sababta aan ilaa iyo hada lamahayo dad lasoqabtay oo laleeyahay wariye hebal ayeydileen ama dagtar hebal ayeydilen aaway mahaysaan halqof hataa marka tankale kamadambeyso all shabaab all sh.b maqariso waxba manalagabato waxa aysameyaan waa ayqirtaan
Xasaasi:- Maxamuud Sayid Aadan iyo BBC-da maxaa dhex-maray? Su’aalo kulul iyo jawaabo yaab lehMarch 8, 2014
Jaamac Maxamed Qaalib oo arrimo xasaasi ah caawa kashifay + Sirta Ethopia ee SomaliaMarch 8, 2014
DAAWO VIDEO “Jilaaga caanka ah ee Soomaaliyeed oo ka soo yeertay arin la yaab leh iyo cabasho ku saabsan….March 8, 2014
DAAWO NAXDIN: Nin Xaaskiisa Waxan la eegi karayn Ku samaynaya, Digniin hadaawan hadii aadan…!!March 8, 2014
DAAWO: Hooyo qurbaha ka tagtay oo ku dhaqaqday talabo lagu farxayMarch 8, 2014
Daawo Sawirada ” Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya oo wata gaadiidka gaarka ee Ciidamada AMISOMMarch 8, 2014
DEG DEG: Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya oo goordhaw Al-Shabaab kala wareegay Degmo Muhiim ahMarch 8, 2014
Ciidamo Yuhuud ah oo Hub ku qabtay Xeebaha Somaliya, Xagee loo waday?March 8, 2014
Turkiga oo gabdhaha Muqdisho fursad cajiib ah siinaya: Daawo VideoMarch 8, 2014
WAR DEG DEG AH: Wafdi ka socda Dalka Turkiga oo Maanta gaaray Magaalada BeledweyneMarch 8, 2014
DAAWO “Filmkii Mudo la Sugayey Sooraan Iyo Jawaan Qeybti 5-Aad Qosol iyo naxdin Leh, Nin Bahal isku badaleyMarch 8, 2014
SHEEKH SHIBLI oo qoray qormo cajiib ah: Dabin MUSLIM mise Dar MUSLIMMarch 8, 2014